warkii.com » Filim loogaga hadlayo noloshii Sushant Singh Rajput ee Bollywood-ka oo waddada kusoo jiro, iyadoo jilaaga filimkan lagu dhawaaqay… (+Xilliga duubista lagu billaabayo iyo xilliga la daawan doono)
Filim loogaga hadlayo noloshii Sushant Singh Rajput ee Bollywood-ka oo waddada kusoo jiro, iyadoo jilaaga filimkan lagu dhawaaqay… (+Xilliga duubista lagu billaabayo iyo xilliga la daawan doono)
Waxaa la soo saaray sawirka ugu horreeya ee kaartada filimka Suicide or Murder ee lagu matalo noloshii Sushant Singh Rajput iyo sababta keentay inuu is dilo, waxaana magaca filimka ka muuqdo in ay qolo ka dambeysay inuu is dilo, sidaas darteedna la dhihi karo xiddiga waa la dilay.
Shirkadda filimada ee Vijay Shekhar Gupta ayaa doorka hoggaaminta ee filimkan siisay wiil xiddig sare ka ah barta TikTok oo lagu magacaabo Sachin Tiwari, kaaso muuqaal ahaan shabbaha xiddigii geeriyooday ee Sushant Singh Rajput.
Sawirka ugu horreeyay ee laga soo bandhigay filimkan waxaa ka muuqda Sachin oo ku matalaya filimkan jilaa ka yimid meel ka baxsan Bollywood-ka, waxaana shirkadda filimkan iska leh ay sheegeen in filimka aanan lagu soo bandhigi doonin noloshiisa oo idil, balse lagu muujin doono waqtigiisii aflaamta.
Waxaa lagu soo warramayaa in mashruucaan duubistiisa laga billaabi doono magaalooyinka Mumbai iyo Punjab bisha Sebteembar, halka la filayo in la sii daayo Ciidda Masiixiga ee sanadkan.
Soo saaraha filimkan ayaa majaladda Indian Express u sheegay in filimkan ay ku soo bandhigayaan dhibaatooyinka ay la kulmaan xiddigaha kasoo jeeda magaalooyinka yaryar sidoo kalena aanan waalid kaga soo horreeyay ku lahayn Bollywood-ka.
Isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yiri: “In Sushant Singh Rajput uu is dilo waxay nagu noqotay naxdin, balse ma ahan wax cusub. Jilaayaal badan oo aflaamta ugu soo biiray inay riyooyinkooda rumeeyaan ayaa ku dhammeystay shaqo la’aan iyo qalbi jab. Kuwo badan ayaa jidkan qaaday halka kuwo kalena ay wali la dhibaatoonayaan noloshooda, sidaas darteed, waxaan rabnaa inaan soo bandhigno sida jilaayaasha ka soo jeeda magaalooyinka yaryar misena aanan cid kaga soo horreysay ku lahayn aflaamta ay u dhibaatoodaan,”
Soo saaraha filimkan ayaa sidoo kale hadalkiisa ku daray inay soo muujin doonaan doorarka kale marka laga soo tago kan atooraha, isagoo intaas ku daray inuu soo qaadan doonaan wajiyada dadka ku dhex barbaaray Bollywood-ka.
Mashruucan waxaa director ka ah Shamik Maulik, halka Shraddha Pandit ay yeelan doonto heesaha filimkan.
Sachin ayaa loo soo doortay inuu filimkan hoggaamiye ka noqdo, waxaana lagu soo doortay inuu u muuqaal eg yahay Sushant, waxaana intaas usii dheer inuu bartiisa Instagram kusoo bandhigo muuqaallo jilliin ah, iyo jir diyaarsan.